Zvaunofunga zvako zvinokosha kwatiri. Tinonyanya kukoshesa kuchengetedza ruzivo rwenyu rwemunhu zvakavanzika.
Nokupinda kana kushandisa sangano reInternetCompany.com, unobvumirana nehupfumi hweAprishoreCompany.com sezvinotsanangurwa pasi apa.
Unhu hwako hwehutano hunokosha.
Mashoko edu atinosunganidza, kana iwe uchipa, inoshandiswa kukutaurira, kukutumira mamwe mashoko pamusoro pezvigadzirwa zvedu nemashandiro, kupa rubatsiro rwebasa uye kupa ruzivo rwepamusoro paunokumbira.
Paunotipa ruzivo rwako nokuda kwezvinangwa izvi, unobvumirana nekuunganidza kwedu nekugadzirisa.
Isu hatina ruzivo rwako nevechitatu mapato
Nokushanyira ma webusaiti yedu, kutumira mafomu eIndaneti kuti uwane mamwe mashoko kana kutenga sangano, nekupa ruzivo rwako rwekutsvaga mu email, iwe unobvuma kuunganidza uye kushandiswa kwemashoko ako ega anozivikanwa, PII, sezvinotsanangurwa pano.
General Data Protection Regulation (GDPR) Dhepfenyuro weDain General is Corporate Corporate Services, Inc.
Mashoko Anogona Kupa Maererano neGDPR
Ruzivo rwomunhu wega unogona kugovera ndeyekugadzirira basa, kukumbira mamwe mashoko uye kugamuchira zvinyorwa zvepamutemo zvepamutemo nekutumira uchishandisa fomu iri paIndaneti pawww.offshorecompany.com.com (iyo webhusaiti), nokutumira email kutitumira, kudana nefoni, tichishandisa mail post kana zvimwe kutaurirana nesu.
Nomunhu Wanozivikanwe Mashoko aunoita ndewezita rako uye ruzivo rwekutsvaga, zvinyorwa zvepamutemo zvepamutemo zvemashuwo akarayirwa, ruzivo rwekubhadhara kwemirairo yebasa, ruzivo rwekutumira kwehutungamiri rwekuendesa uye masuwa ose anodiwa kuti apedze uye ape zvinyorwa, zvakadai; kambani yeruzivo rwekambani, ruzivo rutsva rwekuvimba nezvimwe zvakabatana zvemutemo zvakanyorwa.
Isu takatsunga kutevera GDPR (chinyorwa 5)
Dunhu rega rega richava:
kushandiswa nenzira yepamutemo, nenzira yakarurama uye nenzira yakasununguka maererano nehuwandu hwemashoko ('kutonga mutemo, kusaruramisira uye kujekesa');
kuunganidzirwa kuzvinangwa zvakananga, zvakajeka uye zvakajeka uye kwete kuchinjwa nenzira isina kufanana nezvinangwa izvozvo; kuenderera mberi kushandiswa kwezvinyorwa zvekuchengetedza zvinyorwa mumagariro evanhu, zvesayenzi kana zvekutsvakurudza kwezvakaitika kana zvinangwa zvinotarisirwa, maererano neChitsauko 89 (1), hazvingafungidzi kuti hazvienderani nechinangwa chekutanga ('chinangwa chekutsvaga');
zvakakwana, zvakakosha uye zvisingakwanisi kune izvo zvinodiwa maererano nechinangwa chavanoshandiswa ('kuderedza deta');
rakarurama uye, kana zvichidikanwa, rakaramba richiripo; nhanho imwe neimwe inonzwisisika inofanira kutorwa kuti ivimbise kuti dunhu rega rega risina kururama, zvichienderana nezvinangwa zvavari kushandiswa, rinobviswa kana kugadziriswa pasina kunonoka ('kunyatsorurama');
rakachengetwa muchimiro chinobvumira kutsanangurira nyaya dzekushandisa kwete kwenguva yakareba kune zvakakosha nokuda kwezvinangwa zvekutsvaga kwepadunhu; Dunhu rega rega rinogona kuchengetwa kwenguva yakareba maererano nemashoko ega ega achagadziriswa chete nokuda kwekuchengetedza zvinyorwa mumagariro evanhu, zvesayenzi kana zvekutsvakurudza kwezvakaitika kare kana zvinyorwa zvinowanikwa maererano neChitsauko 89 (1) zvichienderana nekushandiswa kwekodzero yakagadzirwa nehutano nehutano zviyero zvinodiwa nemutemo uyu kuitira kuchengetedza kodzero uye rusununguko rwezvinyorwa zvinowanikwa ('kuchengetedzwa kwekuchengetedza');
inogadziriswa nenzira inochengetedza kuchengetedzwa kwakakodzera kwemashoko evanhu, kusanganisira kudzivirirwa pakusagadziriswa kusina mvumo kana kusingabvumirwe nemutemo uye pasina kukanganisa kusinganzwisisi, kuparadzwa kana kukuvadzwa, uchishandisa nzira dzakakodzera dzehutano kana sangano ('kutendeseka nekuvanzika').
Isu tinoshandisa masangano ehuwandu hwemabhizimisi ehurumende kuchengetedza ruzivo rwevashandi vakatsigirwa nehutano hwekugadzirwa kwemazuva ano uye akazvitsaurira mamiririri. Sangano redu rine "DPO" Data Protection Officer iyo inogona kuwanikwa iko kuonana peji pane ino webhusaiti.
Isu tinoshandisa vatatu vapepeti kuti vatore webhusaiti yedu uye kupa hutano, kutumira, kutengesa / kubhadhara uye kubhadhara kubhadhara.
Isu tinoshandisa mhizha inoshandiswa, nzira dzakanakisisa-maitiro uye kuvhara pose pose zvichibvira apo kugamuchira, kutumira nekuchengetedza ruzivo rwako.
Nokupa ruzivo rwemunhu oga, unobvumirana neizvi.
Mashoko atinounganidza patinoshanyira webhusaiti yedu:
your IP address, browser, operating system and computers type with extensions, plugins and other information device
kuti iwe wakawana sei webhusaiti yedu, zuva uye nguva yaunoshanyira webhusaiti yedu uye nezvehuwandu hwaunofunga, uchitaura nzvimbo uye injini yekutsvaga.
Kugovana Dhainu Dzako
Tingazarura ruzivo rwako chete nemvumo yako kana kuti titeerere mitemo inotungamirira kana mitemo yematare.
Kana iwe uchitumira fomu yekubatanidza pane webhusaiti yedu, minda yaunotumira inotumirwa kuBusinessForce bhizinesi rebazi reRM service uye MailChimp tsamba rekuchengetedza mabhuku. Izvi ndizvo GDPR inoenderana nevechitatu-data data pro processors.
Kana iwe unyoresi, fona pafoni kana kuti utaure nesu, tinogona kupindura ne email - mavharivha edu anopiwa neGoDaddy uye tinoshandisa Microsoft Outlook email software. GoDaddy naMicrosoft GDPR inopindirana nevanokonzera data yechitatu.
Zvose zvitatu zvepurogiramu yedhesi yatinoshandisa ndeye GDPR inogamuchirika
Google - Imeyili uye Website Analytics Provider
SalesForce - Muchengeti weRRM
GoDaddy - Web Host uye Hardware Provider
GoogleDrive - Nyaya Yokudhinda / Kugadzirisa Solution
Facebook - Mupiro Wechipatara
Account Merchant - Payment Processor
Tingazobudisa pachena ruzivo rwako maererano nemutemo kana kubatanidzwa kwekambani / kubatana.
Nzira yatinoshandisa nayo data yako
Mashoko anopiwa newe inoshandiswa kukwanise zvinodiwa kune chero zvikumbiro zvekutsvaga kana mabasa, zvigadziriswa kumitemo yakakosha yenyika yose, kukurudzira uye mazano.
Mashoko atinounganidza inoshandiswa kuongorora basa rebhundaneti uye kuvandudza zvinyorwa uye ruzivo rwevashandisi, kutarisa kushambadzira mari uye kuedza pamwe chete nechinangwa chekukurudzira nekufarira.
Mashoko echitatu ari oga inogona kusanganiswa nemashoko awakapa kana kuunganidzwa, kuti ashandiswe maererano nemutemo wepabonde.
Kodzero dzako pasi peGPDR
Kodzero Yokutaura - Kodzero yekubvunza kuti ndeupi wega data iripo uye kuti iri kushandiswa sei.
Kodzero yekuwana - Kodzero yekuona iwe pachako data.
Kodzero Yokugadzirisa - Kodzero yekugadzirisa uye kugadzirisa kana isina kuongororwa.
Kodzero yekurega kubvuma - Kodzero yekudzosa mvumo yekuunganidza uye kushandiswa kwemashoko ega ega.
Kodzero Yokutsvaga - Kodzero yekupikisa dheinhau rako pachako riri kushandiswa.
Kodzero yekuramba kushandiswa kushandiswa - Kodzero yekurwisana nechigadziro chakaitwa nekugadzirisa kushandiswa.
Kodzero yekukanganwa - Kodzero yekukumbira deta yako kuti ishandiswe.
Kodzero yekugadzirisa deta - Kodzero yekukumbira kudhinda deta yako - data inofanira kugoverwa kana kuendeswa mumashini anonyatsogadzirwa nemagetsi.
Ticharamba tichichengetedza vatengi vemashoko kwenguva yakareba sezvazvinenge zvichidikanwa kuti tizadzise urongwa hwebasa uye tibatsire zvikumbiro uyewo titevedze zvido zvepamutemo.
Taura nesu pamusoro pokubvisa data yako.
Kuratidzirwa nevana vaduku vari pasi pe16-makore
Kubvumirwa kwevabereki kunotarisirwa tisati tatipa nemashoko ako ega.
Dzorera kubvuma kwako
Taura nehofisi yedu uye tsanangura ichi chikumbiro chekudzorera mvumo yekuunganidza uye kushandiswa kwemashoko ako ega.
Nhepfenyuro Inobvunza Chikumbiro (SAR)
iwe unogona kukumbira kuti titumire tsanangudzo pamusoro pehupi hupi huno ruzivo rwemunhu isu tine, kana
unogona kukumbira kuti tigadzirise chero kusanzwisisika, kana
iwe ungatikumbira kuti tibvise data yako yose.
Maererano neGDPR, zvikumbiro zvose zvekuwana zvinopiwa pachena mushure mezuva .
Pamibvunzo ipi neipi ine chokuita nedata rako, kana kutumira zvikumbiro, tapota taura nesu:
Nhare: + 1 (800) 959-8819
Isu tine dambudziko redu purogiramu yega yega.
Tinogona kubatanidza kune mamwe mawebsite. Zvakakosha kutarisa mararamiro avo ega uye kuchengetedza kuti mamwe mawebsite ari GDPR anoenderana musati watumira ruzivo rwemunhu.
Isu hatigamuchiri mutoro chero upi zvawo kana mutoro wekuchengetedza wega wega mapato.
Cookies inoshandiswa nemvumo yako, iyo iduku duku dziri pakombiyuta yako dzinokuzivisa iwe webhusaiti yedu.
Mafuta ekiki tinoshandisa
Website Analytics: inopa huwandu hwevashanyi, kugadziriswa kwemigwagwa uye hutsika hwehutano kuitira kuvandudza kushambadzira kwedu uye ruzivo rwevashandi.
Kutsvaga Targeting: zvinyorwa zviito zvinotorwa pane webhusaiti yedu sehuwandu hwawakakumbira uye hunobatanidza iwe. Isu tinoshandisa izvi kuvandudza mashoko nemashoko pane webhusaiti yedu uye zvinhu.
Thirty party party cookies
Chechitatu-party cookies inogona kuiswa pawebsite yedu inosanganisira:
Google Analytics inounganidza dunhu risingaiti pachedu pamusoro pekushandiswa kwewebsite maererano nemitemo yavo yega yega: www.google.com/policies/privacy/
Iko yeGoogle Remarketing cookie inopa nzira yekuchenesa zvinyorwa zvakapiwa kwauri zvichienderana nemushumo wekutsvaga webhusaiti yedu. Unokwanisa kubva pane izvi muGoogle Ad Settings.
SalesForce ndiyo CRM yedu uye makiki anotibvumira kutarisira kusangana nevatengi pamusoro pekukumbira ruzivo nemirairo yebasa.
Wordfence is WordPress Security Option iyo inoshandisa cookie kuti uone kana uri munhu anoshandisa munhu.
Facebook Pixel inopa webhusaiti rekutsvakurudza ruzivo kuti ruongorore kushandiswa kwechikwata
Iwe unogona kuvhura makiki nekushandura mararamiro e browser yako.
OffshoreCompany.com ibhizinesi rebhizimisi uye kwete gwaro rakasimba. Hatipi kupa mazano emutemo kana emari.
Kana iwe uine mibvunzo, zvinonetsa, kana mazwi pamusoro pehutano hwepachivande kana maitiro, tinoda kuziva zvavari kuitira kuti tivegadzirisa. Ndapota taura nesu pa 1-800-959-8819.